Mono Stringer Staircase-Mid ka mid ah Naqshadaynta Jaranjarooyinka Casriga ah ee ugu Fiican
Mono Stringer Staircase-Mid ka mid ah Naqshadaha Jaranjarooyinka Casriga ah ee ugu fiican Mono Stringer Staircase Styles Styles Jaranjaradu ma aha oo kaliya naqshad socod toos ah. Si loo tixgeliyo dhismaha guriga iyo qaab -dhismeedkiisa, jaranjaradan xarig -jarka ah waxaa loo qaabeyn karaa qaabab badan i ...
Hoteelka William Vale
Guriga ku yaal Brooklyn, William Vale wuxuu u taagan yahay hudheelka kaliya ee raaxada ee Williamsburg. Ku dhex quuso dhaqankeena firfircoon iyo hal -abuurka, gudaha iyo dibaddaba. Khibrad u arag magaalada ugu weyn adduunka Waxaan bixinay 1700mitir Aluminium Muraayad Muraayad leh iyo 198 set ...
Sofitel Thalassa Alger Sea & Spa iyo Sofitel Diététique Alger & Spa
5 xidigta hudheelka ah ee birta aan lahayn bir -birta -balaastikada hudheelka hudheelka Macaamilka: SIH - Société d'investissement Hôtelière - Staoueli, Algeria Maareynta: SOFITEL - Hoteellada Accor Waxa aan u fidinno mashaariicdan: Waxaan siinnay dhammaan balakoonka balakoonka birta balustrade ee B1 .. .
Panama Metro Line 2 Mashaariicda
Khadku wuxuu leeyahay dherer dhan 21 kiiloomitir oo ah waddo aad u sarreeya wuxuuna ka kooban yahay 16 saldhig oo leh sagxad ballaadhan, oo gaadhay dabool iyo ilaalin weyn xilli -roobaadka. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban yihiin aluminium aluminium ah iyo nalalka polycarbonate -ka oo u shaqayn doona keydinta tamarta, ...
Hal Guri Block C San Sancos, CA 92078
Block C Ka faa'idayso daqiiqad kasta Degmada North, San Diego. Ku raaxayso khibrad nololeed casri ah oo casri ah oo ku taal Guryaha Block C ee San Marcos. Ku dhex quuso barkadda hoosteeda darbigayaga quruxda badan ee quruxda badan, hagaaji jadwalkaaga jimicsiga ee xaaladdeena-...
Jaranjarada Casriga ah ee Casriga ah ee Ameerika
Jaranjaro laba jibbaaran oo leh galaas barafoobay oo soo degtay & tuman, muraayado dhalo kulul leh, iyo gacmo -qabad biraha ka samaysan oo leh dhammayn dusha sare. Gacan -ku -haynta birta ka samaysan si toos ah ayaa loogu dhejiyay muraayadaha jaranjarada. ...
Abuur ikhtiyaarradayada Balustrade Decking
Ku -darka balustrade -ka beertaada beerta ayaa ah hab fiican oo lagu dhammaystiri karo muuqaalka iyo in bannaankaaga bannaanka la dhigo. Balustrades waxay kaloo hagaajin kartaa badbaadada sagxaddaada, gaar ahaan haddii ay ka sarreyso beertaada inteeda kale. Waxaan bixinaa tiro balu ah oo soo jiidasho leh ...